Sina 100% Tela-drindrina ao anaty fandroana tsy misy rano - China Texture factory and manufacturing | DEDGE
100% Panelan'ny rindrina fandroana tsy misy rano - Fitaovana vita amin'ny hazo
Inona ny tombotsoan'ny Wall Panels Cladding?
1. Fiarovana maintso sy tontolo iainana
Ny akora ampiasaina eo ambonin'ny vokatra dia fitaovana ara-tontolo iainana. Ny efitrano napetraka dia sariaka amin'ny tontolo iainana ary tsy misy tsirony. Raha voaravaka iray manontolo ny efitrano, dia tsy misy ny fandokoana. Io dia mamaha ny olan'ny fotoana haingon-trano sy ny fofon'ny loko. Raha apetrakao anio dia afaka mifindra rahampitso ianao, izay tena mahavonjy fotoana.
2, fametrahana mora
Raha ampitahaina amin'ny fitaovana fanaingoana nentim-paharazana dia azo apetraka haingana be ny tontonana rindrina. Ny rindrin'ny rindrina nentim-paharazana dia mila hosoratana imbetsaka amin'ny vovoka putty sy loko, raha ny rindrina rindrina tafiditra kosa amin'ny ankapobeny dia mila apetraka mivantana fotsiny. Ny rindrina dia tsy mila fitsaboana ary azo apetraka mivantana. Ao amin'ny trano marokoroko.
3, tantera-drano sy hamandoana
Ny toetrandro mando any atsimo dia mahatonga ny efitrano ho mando kokoa. Ny rindrina misy taila vita amin'ny keramika na loko dia hampiseho tasy be dia be amin'ny rano, ary ny tontonana rindrina mitambatra dia afaka mitazona ny fizotrany mandritra ny fotoana maharitra.
4, mora kosehina tsy misy fanovana
Ny teknolojia fitambaran'ny polyurethane ampiasaina amin'ny rindrin'ny rindrina dia misy fiantraikany tsy misy fiovana ary tsy misy fahanterana aorian'ny famoronana ny vokatra. Ny valindrihana mirindra dia voahodina amin'ny alàlan'ny fanamainana hafanana avo lenta, izay manana asa tsara tantera-drano sy hamandoana. Ny fanosorana moramora ihany no ahafahana manala ireo tasy, ary tsotra ny manadio azy.
INSTALLATION SY ACCESSORIES
Ny tontolon'ny rindrina Wpc anatiny sy ny rindrin'ny rindrina SPC ho an'ny rindrina any ambadika
Inona no atao hoe tontonana pvc?
Miaraka amin'ny fivoaran'ny siansa sy ny teknolojia, ny haingon-trano anatiny dia mihamitombo avo lenta ary mihamaro hatrany. Anisan'ireny, ny fivoaran'ny takelaka dia miavaka kokoa, ary misy panelika manokana-PVC PANEL nalaina, izay manana anarana maro, toy ny wpc pvc panneau, mametraka haingana ny wpc wall panel sns, ny vokatra dia karazana haingon-trano rindrina vaovao. fitaovana vita amin'ny fitaovana pvc toy ny akora ary ny fizotry ny sarimihetsika amboniny. Amin'izao fotoana izao, ny takelaka rindrin'ny pvc dia manolo tsikelikely ireo fitaovana fananganana rindrina nentin-drazana. Ny fisehoan'ny takelaka rindrina dia azo volavolaina amin'ny fomba isan-karazany. Ny fomba mahazatra indrindra dia ny teknikan'ny haingon-trano toy ny fanaingoana sary an-tsary sy ny fanontana 3D.
Ny PANELA PVC dia azo zaraina ho V sy seams fisaka ao amin'ny tonon-taolana. Ny lamosina dia natao tamin'ny takelaka fisaka sy ny lalan-kely fanoherana ny slip. 400mm sy 600mm ny sakany.
Tombony amin'ny Pvc Wall Panel, hihaonana amin'ny fampiasana ny toerana ara-barotra sy an-trano:
1. Fiarovana ny tontolo iainana, fitsitsiana angovo, azo ampiasaina indray, 100% tsy misy formaldehyde sy akora manimba hafa.
2. Voaporofo amin'ny hamandoana, fanoherana ny harafesina, porofon-afo ary porofon'ny bibikely.
3. Ny hery mihantona mahery, 30kgs mihantona tokana dia azo ampiasaina amin'ny enta-mavesatra amin'ny fotoana maro.
4. Kanto sy mora diovina sy tazomina.
5. Ny fahamendrehana tsara, lanja maivana, ny halavany dia azo tapahina tsy amin'antony nefa tsy very sy fako
6. Famolavolana iray, mora apetraka, vanim-potoana fananganana fohy, tsy misy fepetra takiana amin'ny tontolon'ny fananganana.
Anaran'ny vokatra Atitany Wpc Wall Cladding
Kaody Hs 3925900000
MODELY Kitapo rindrina vita amin'ny hazo
Size 400 * 8mm
Lenghth 2.8 Meter na na namboarina
ara-nofo SPC: Composite Stone Pvc.Vovoka resina PVC, vovoka calcium calcium ary fitaovana hafa fanampiny
Loko Ek, Volamena, Mahogany, Teak, Cedar, Mena, volondavenona klasika, Walnut mainty
Kaomandy farany ambany Kaontenera feno 20ft, 500 metatra isaky ny lokony
Fonosana Canton standard
Fitrohana rano Latsaky ny 1%
Haavo maharitra Haavo B
Fe-potoana fandoavana 30% T / T mialoha, ny ambiny 70% aloa alohan'ny fandefasana
Fotoana fanaterana Ao anatin'ny 30 andro
fanamarihana Ny loko sy ny habe dia azo ovaina araky ny fangatahan'ny mpanjifa
Hotely, tranom-barotra, hopitaly, sekoly, lakozia an-trano, fandroana, haingon-trano anatiny sns
1) Fiorenana matevina, faharetana, fahatsapana voajanahary
2) Fanoherana ny lo sy ny triatra
3) Milamina amin'ny ambaratonga maripana marobe, mahazaka toetr'andro
4) Marefo ny hamandoana, miparitaka ny lelafo ambany
5) mahatohitra fiantraikany avo
6) Fitazomana visy sy fantsika miavaka
7) Sariaka amin'ny tontolo iainana, azo haverina
8) Karazan-dahatsoratra vita sy bika
9) Vokatra mora foana ary foronina mora foana
10) Tsy misy akora simika na preservatives misy poizina
A. 100% tsy tantera-drano
B. Sariaka amin'ny tontolo iainana
C. Mandoka feo
Teo aloha: Orange, fotsy, lamosina, manga sy maitso SPC Wall Panel - loko madio
Manaraka: Panelan'ny rindrina mandro PVC ho an'ny trano - Volavola famolavolana
Taratasy amin'ny rindrina
Fametrahana tontonana amin'ny rindrina
Làlana 1: Fantsiho amin'ny rindrina mivantana ny rindrina amin'ny rindrina vy
Fomba 2: apetaho eo amin'ny rindrina aloha ilay keel, ary apetaho mivantana amin'ny rindrina vita amin'ny vy ilay takelaka rindrina
Fomba 3: fantsika amin'ny rindrina mivantana amin'ny rindrina fantsika ny rindrina
Drafitra sy fametrahana fametrahana kojakoja vita amin'ny rindrina
Amboary amin'ny rindrina aloha ny Pvc Buckle, avy eo atsofohy ao anaty pvc Buckle ireo fitaovana
Fanentanana ASTM F2055 - Mandalo - 0,020 in. Max
Ny habe sy ny fandeferana ASTM F2055 - Mandalo - +0.015 isaky ny tongotra linear
hateviny ASTM F386 - Mandalo - Nominal +0.006 ao amin'ny.
manovaova ASTM F137 - Mandalo - ≤1.1 in., Tsy misy triatra na vaky
Fahamarinana azo refesina ASTM F2199 - Mandalo - ≤ 0,025 in isaky ny tongotra linear
Fanoherana ny fifohana sigara EN ISO 9239-1 (Flux Critical) valiny 9.2
Fepetra takiana amin'ny Wear Group pr EN 660-1 Thickness Loss 0.30<I<0.60 prEN 660-2 Volume Los 7.6<F <15.0
Fanoherana ny hazavana ASTM F1515 - Mandalo - ∧E ≤ 9
Fanoherana ny hafanana ASTM F1514 - Mandalo - ∧E ≤ 9
Famintinana aorian'ny fisehoan'ny hafanana EN 434 <1.8mm mandalo
Haingon-trano UV Glossy SPC Sheet
Valin-drihana diso Wpc Pvc anatiny sy ivelany
Wall Panelling anatiny mora vidy TV Background 202 ....
100% Panels Wainscoting tsy misy rano 204.15mm
Fitafiana amin'ny rindrina ao amin'ny fandroana 199.13mm
Panelan'ny rindrina mandro PVC ho an'ny trano - Volavola famolavolana